Iyi OPEN Space Inogutsa Mazano Ako Ese. Izere Ne "Nzvimbo Dzakavanzika" - Yakanakisa Kitchen Faucets 2021 | Yakanakisa Bathroom Faucets | WOWOW Faucets
Yakanakisa Kitchen Faucets 2021 | Yakanakisa Bathroom Faucets | WOWOW Faucets
Bridge Jikoni Faucets
Wowow tepi Installation
Wall Mount Sink Mabhomba
musha / Interior design / Iyi OPEN Space Inogutsa Zvese ZvePfungwa Dzako. Iyo Yakazara Ne "Nzvimbo Dzakavanzwa"
Iyi OPEN Space Inogutsa Zvese ZvePfungwa Dzako. Iyo Yakazara Ne "Nzvimbo Dzakavanzwa"
2021 / 08 / 08 kupatsanuraInterior design 4684 0
Hyuk Dhizaini Yemukati Dhizaini Mubatanidzwa
Chii chakaita kuva neimba izere ne "nhengo"? Usangobwaira, imba yatiri kukuratidza nhasi yakatosiyana! Imba iri pakati peShanghai, padhuze neiyo yakakurumbira Wukang Chivakwa. Nzvimbo yayo yakasarudzika, uye dhizaini yayo yemukati yakatosiyana.
Iyi ndiyo imba yeKati, murume wake, uye katsi mbiri. Varidzi vese vane veteran gamers uye vafamba kuenda kune dzinopfuura nyika makumi mana apo vezera ravo vari kuyedza "kufambisa zvidhinha". Kana mweya miviri inowirirana ikasangana uye inopindirana, inova chishuwo chakajairika chekuita dink, kuva nekatsi uye kutamba pasi rese pamwechete. Nezve musha wavo mutsva, ivowo "vabuda munzira yakarohwa": vanoda kuti ive isingamanikidzike uye ive yakasununguka, kusununguka kubva muhusungwa uye kuve nzvimbo yekugara.
Imba iyi yakatengwa makore gumi apfuura, uye yakaendeswa nemabheji pavanotanga. Nekuti ini ndinofamba nemurume wangu nguva dzese, handipedze nguva yakawanda ndiri pamba, saka handina zvido zvepamusoro zvemusha wangu. Paive pasati pari kusvika denda ra2020 apo kungoerekana kwasvika kwehupenyu hwemumba kwavo kwakapa pfungwa yekugadzirisa imba yavo.
Iyo yekutanga nzvimbo yaive yemakamuri maviri, imwe-kamuri dhizaini, uye yekutanga nzvimbo yaive yakangojairika uye iri kure neinonakidza imba varidzi vedzimba vaishuvira. Mushure mekunzwisisa maitiro avo ehupenyu, takashinga kuvhura nzvimbo uye ndokuzoshandisa michina dhizaini kugadzira zvinofamba makabhati uye masofa anosimudzwa, tichiita imba yakanyanya kuvhurika, nzvimbo dzinobatanidza, pasi dzisina chinhu uye nhengo dzakavanzika mudenga. Izvi zvinonakidza uye zvinonakidza!
Paza tsika, yakawanda mhepo
Rusvingo pakati peimba yekupinda neimba yekutandarira rwakabviswa kuti pagadzwe maseti matatu emakabati anofambiswa achishandisa michina dhizaini. Iyi ine hukuru hukuru uye haitore chero nzvimbo, saka inonzi "Cat nhare mbozha".
Kana makabati akavharwa, ivo vanongotora chikamu chenzvimbo, vachiita kuti mukova uve pachena uye kupenya, uye kugadzikana kufamba. Vhura iyo cabinet, iyo yakafanana nekamuri diki yekutarisa, iwe unogona kuchengeta dzakasiyana shangu, mbatya. Nekuti zviri nyore kwazvo kuvhura nekuvhara, saka zvinhu zvese zvinowanzo shandiswa zvinogona kuchengetwa mairi, saka hauchafanirwe kunetseka nezve imba mune nyonganiso.
Iyo kicheni, yekupinda horo uye yekugezera pasi pane grey mataira. Idzo dzimwe nzvimbo dzakareruka-huni pasi, zvisina musono dzakapetwa neakaonda kwazvo skirting, zvichiita kuti kutaridzika kuve nyore.
Kupetwa kwegrey uye chena pamadziro kunoreva kuti nzvimbo yacho yashandurwa uye kwete chete ine hutungamiriri hwekuona, asi zvakare inotarisirwa zvakanaka. Iyo track yeiyo cabinet yakagara yakavigwa-mudenga uye pasi pamberi. Tambo yakatetepa chete ndiyo inoonekwa mushure mekupedza, uye iyo nzvimbo yakazara ine hunyanzvi uye hwakawanda mhando.
Inonakidza, izere nemaitiro, inonakidza uye nyore kushandisa
Mukugadzira imba ino, hatina kuomerera pamusambo. Panzvimbo iyoyo, isu takasiya yakakwana chena nzvimbo zvichibva pane zvinoita uye rega maratidziro ehupenyu ave akanakisa kushongedza.
Kana imba yemabasa akawanda yakavhurwa, imba inowedzera kuwanda. Kuwedzeredzwa kwegirazi hombe hakugutsi chete muridzi wemba yekufamba, asiwo kunokudza nzvimbo kuburikidza nekubvongodza, ichiita kuti imba iwedzere kupenya uye kupenya.
Imba yekugara-yekudyira haina kushongedza kusiri madikanwa. Kabhineti nemacheya mashoma zvinosiya nzvimbo yakakwana yekufamba kwemahara. Iyo yakajeka-yehuni hura pasi inowedzera mwenje kuburitsa, uye neiyo Shangri-La machira, mukamuri mune yakapfava uye yakajeka mhepo.
Kabhineti inotambanuka kubva kuimba yekudyira kuenda kuimba yekutandarira, uye tafura yekudyira inomiswa padhuze nekabati. Tafura yekudyira ine nzira yakavanzwa inobvumira mhuri kudya nekumwa kana tafura yadzikiswa. Kana tafura ikavharwa, inoshanduka kuita musuwo wekabineti, ichisiya nzvimbo yakakwana. Iwe unoda kuchovha bhasikoro kumba hakuna dambudziko!
Maindasitiri dhizaini simbi dhiramu mukati mekuchengeterwa kwemazhinji mamakusheni. Kana iwe ukaiburitsa kana mumwe munhu akauya kuzokushanyira, unogona kushandisa simudza seatami mat, iri nyore uye inoshanda. Pamusoro pebhari pane zvinomera zvakasvibirira, saka unogona kubatidza mwenje husiku uye kuzorora uropi hwako nemumhanzi, izvo zvinokubatsira kubvisa kuneta kwezuva.
Muridzi anofarira kutora mifananidzo paanofamba. Mifananidzo iri mumba inoda kuchinjwa nguva nenguva. Isu takagadzira tambo dzesimbi pamwe nemahwindo kuitira kuti iyo yekushongedza pendi ishandurwe ivo vega. Imba inogara ichipa pfungwa yehutsva uye haina kuneta nekugara imomo kwenguva yakareba.
Dhizaini yakavhurika inosunga nzvimbo dzese pamwe chete. Girazi hombe rinoshanda kuwedzera nzvimbo uye rinogutsa kudiwa kwekufamba.
Sezvo rusvingo rwakatakura mutoro pakati pemba yekutandarira neimba yemabasa akawanda yaisakwanisa kubviswa, uye nekuda kwekuda kwesofa, takashandisa rusvingo runotakura sembiru. Isu takaisa njanji inotsvedza kuti iite yekusimudza mhando bhodhi kugadzira "inosimudza mhando imba yekutandarira". Kana vashanyi vauya mumba, inogona kudzikiswa kuti ishande sebhawa. Inogona zvakare kukwidziridzwa kusvika pakati-pemhepo sesofa nap. Kana iwe usiri kuida, inogona kukwidziridzwa kumusoro, uye vanhu vanogona kupfuura pazasi pasina zvipingaidzo.
Nekuti muridzi anofarira kugwinya, takaisa "manera" mumhepo. Kuti udzivise zvinoonekwa nekukurumidza, kubatana kwemanera kwakatemerwa zvakanyanya, uye nemwenje wemuno kuita kuti chikamu ichi chionekwe chakachena uye chakachena. Kazhinji, Katsi nemurume wake vanogona kubata manera ekurovedza muviri. Ivo vanogutsikana zvakanyanya nechikamu ichi che dhizaini, nekuti haitore chero nzvimbo yepasi zvachose.
Rusvingo rwese rwunoshanda zvizere, uye yekugezera yekuruboshwe inosundidzirwa mukati kugadzirisa kabhodhi. Iyo yemukati yakarongedzwa nemapango emadziro. Mhando dzese dzemidziyo yehutano hwevaridzi vemba dzinogona kusungirirwa mumapoka akasiyana.
Kurutivi rwerudyi, kune kabhedhidhi yeimba yekurara. Inogona zvakare kufambiswa zviri nyore nenjanji.
Imba yekugezera iri pakati isu isingaoneke pamusuwo. Musuwo wepamusoro uye yunifomu kara haina kukurumidza zvachose. Musuwo unovhura uye unovhara kuviga imba yekugezera uye makabati ekuchengetera, zvichiita kuti iwedzere kuoneka.
Inochinjika inofamba tambo uye inonakidza kurarama
Musuwo wedura repamusoro uri nyore uye mudenga. Kabhineti hombe kudivi rerudyi yakabatana neruvara rwemukati. Izvi zvinoderedza pfungwa yekuvapo uye zvinoita kuti zvinoonekwa zvive zvakabatana uye zvitsva. Inogona zvakare kushandurwa! Fambisa makabati uye inova yakapetwa kairi-yakafanana yakaita cheki. Vhara kabhineti, uye nyowani mhepo haina nzvimbo.
Imba yekurara ishanduko kubva pane zvakajairwa, iine rima solid huni mbiri mubhedha. Tafura yemubhedha nemubhedha zvakabatana seimwe, kuitira kuti kuchengetedza kuve nesimba uye zvakare kuita pfungwa yekumonera, kuitira kuti vanhu vakwanise kurara. Imba yekurara haina chishongo chisina basa, yakapusa, inozorodza uye inoporesa.
Iyo tenzi yekurara ine hwindo hombe. Kana mamiriro ekunze akanaka, zuva rinogona kubuda zvine husimbe. Kitsi yekukwira furu inoiswa padivi pemubhedha. Katsi dzinowanzo sunbathe pano zvakanaka, simbe uye inodziya.
Imba yekurara ine masikati nehusiku machira, uye iwo akatwasuka mapofu. Izvi zvinowedzera kuzorodza uye mumhepo kupfuura zvakajairika machira machira. Kuvhenekerwa kwechiedza mumba zvakare kuri nyoro uye kuri nani. Transparent acrylic yakaturika tsvimbo akaisirwa parutivi rwehwindo, kuti iwe ugone kusungirira mapijama ako chero kwaunoda! Chengeta imba yako iri nyowani uye yakashongedzwa chero nguva, chero papi zvapo, mairi zvakasununguka zvakanyanya.
Vhura nzvimbo uye famba wakasununguka
Wakamboona imba yekugezera isina musuwo here? Iyi "yakavhurika yakavhurika ina yakavhurika" munzvimbo yakavhurika zvakakwana, asi yakaturika keteni. Iine mazwi mana makuru akanyorwa pairi nemashiripiti mabrush: Hakuna musuwo! Cat akatsanangura izvozvo nekuti imhuri dink. Vaviri chete vanhu vanorarama, kuti vari kufara sei kuuya.
Tichifunga kuti imba yekugezera ishoma, pamwe chete nenhamba diki yevagari vemo, hapana dhizaini dhizaini hombe yekugezera, asi bhesheni rekugezesa. Iyo inosanganisirwa neplate simbi mahwendefa uye yakagadziriswa kumadziro. Nepombi yakasungirirwa pamadziro uye pombi yemadziro, inozorodza zvikuru.
Iyo kicheni yakashandurwa ikave kicheni yakavhurika nekuti Cat nemukadzi wake vanodya zvakapusa. Iye kazhinji haabike, saka hapana dambudziko regirisi mumba. Iyo shangu kabhineti yakabatana necabinet, uye iyo yekuchengetera ine simba kwazvo. Kupeta zvituru zvakaiswa pamadziro, zvichiita kuti zvive nyore kuchinja shangu. Paunovhura kicheni, unonzwa kupenya uye wakapamhama paunouya kumba. Hapana chikonzero chekubatidza mwenje masikati, uye inopenya kwazvo paunodzoka kumba.
Kicheni countertops yakamisikidzwa, zvichiita kuti kubika kuve nyore uye kuve nyore kuwanda. Yakazara nemachena, zviri nyore kutarisira, kuchengetedza nguva pamabasa epamba. Iyo washer-dryer inoiswa mukicheni, ichisunungura nzvimbo yekuomesa pavheranda. Kune zvakare nzvimbo yekuomesa yekunze, saka zviri nyore kuti uome uye uchenese mushure mekuwacha.
Muridzi wemba aisasimudza maruva. Nekuda kwekuwedzeredzwa kwenzvimbo yevaranda, mhuri ine imwe balcony, saka vanoisa radhi yemamita matatu-refu. Iwo mukana wakanaka wekudyara maruva uye zvirimwa kusimbisa mamiriro uye kunatsa imba.
▲ Yekutanga pasi peurongwa
▲ Urongwa hwepasi
Pamberi uye mushure mekushandurwa
Vhura kicheni uye ubatanidze balcony mhenyu mukati. Iyo refu yekushanda counter inopamhama uye inobatsira, uye iko kupenya kwakajeka.
Gadza kabhodhi pakati pekupinda uye yekugara-yekudyira imba uye isa iyo mobile track. Inogona kudhonzwa zviri nyore kuvhurika. Inogona kuchengeta zvinhu zvakawanda pasina kutora nzvimbo.
3, Vhura imba yekugezera uye gadzira inotsvedza masuo kumativi ese. Vagari vanogona kuvhara kicheni uye yakawanda-inoshanda kamuri kuburikidza neyekugezera. Mutsara wekufamba kwemukati uri wakatsetseka.
4, Vhura yechipiri yekurara uye batanidza neyevaeni yekudyira. Nzvimbo yeruzhinji yakakura uye yakasununguka. Sofa rinosimudzwa rakagadzwawo pakati penzvimbo yekudyira-yekudyira uye iyo yakawanda-inoshanda imba. Kazhinji, vanhu vaviri vanogona kushandisa chigaro pamba. Vaenzi vanogona kuisa pasi pasofa uye kugara pamwe chete kuona mafirimu uye kutaura.
Iyo tenzi yekurara yakarongedzwa nekamuri yekutarisa, ino zvakare iri yemuchina inofambika kabati. Kuchengetedza kune simba uye kuchengetedza nzvimbo.
Purojekiti Nzvimbo 丨 Shanghai, China
Nzvimbo yeprojekti 丨 80㎡
Project Dunhu: Huining Bindu
Dhizaina Dhizaina Dhizaina Yake
Zvishandiso zvinoshandiswa: Matanda, simbi simbi, dombo, latex pendi ……
Kugadzira dhizaini netembiricha, kuzadzisa imba ine manzwiro
Pakapfuura :: Nzvimbo Yakashongedzeka Iyo Yakave Yechinyakare Uye Yemazuva Ano, Kugara nhaka Charm YeEast - Millo Reflections Zvadaro: 90 Square Mamita Chic Chimiro Yakanaka Imba, Retro Yemahara Kutaurisa Kwakanyanya Kunyaradza | Kugara Kugadzira
Yakakwira-Giredhi Grey + Cardamom Girini, Mudiki Uye Yakakwira-Yemahara Kugara | Yuanhe D ...
2021 / 08 / 15 3375
Imba Yechikoro Dunhu Inopaza Kupfuura neiyo "Yakare Uye Yakashongedzwa" ...
2021 / 08 / 15 4283
Kuisirwa Art + Natural Elements, Kufuridzira Isingaperi Kufungidzira Kweiyo Futu ...
2021 / 08 / 15 3774
Yakashongedzwa Uye Yakashongedzerwa Chirevo, Kuumba Muguta Rekugara Space | SRDP DESIGN
2021 / 08 / 14 3488
Micro Cement + Rattan, Shandisa Texture Kugadzira Space Atmosphere | HURD MADZIMAI
2021 / 08 / 14 3899
Chiedza-Ruvara Acrylic, Kududzira Runako RweArt Mune Mune Yemazuva Ano Conte ...
Dzvanya kukanzura kupindura
Dzvanya pano kuti ubvise mhinduro.
Yakavanzwa Wall-Mount Sink Faucets